Ronaldo oo Xalay Dhigay Rikoor Cusub oo Xulkiisa ah Mid kalana jabiyay | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Ronaldo oo Xalay Dhigay Rikoor Cusub oo Xulkiisa ah Mid kalana jabiyay
Ronaldo oo Xalay Dhigay Rikoor Cusub oo Xulkiisa ah Mid kalana jabiyay
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa sii kordhiyey rikoodh uu hore u haystay, mid kalena dhigay intii ay socotay ciyaar saaxiibtinimo oo xulka qaranka Portugal uu 3-0 ku garaacay Qatar.
Laacibka Manchester United ee 36 jirka ah ayaa shabaqa taabsiiyey goolkiisii 112aad ee uu u dhaliyo waddankiisa, halka uu sidookalena jabiyey rikoodhkii Sergio Ramos ee ciyaartoyga ugu safashada badan qaramada Yurub.
Cristiano Ronaldo oo bishii hore jabiyey rikoodhkii gool-dhalinta halyeyga reer Iran ee Ali Daei oo 109 gool dhaliyey, waxa uu hadda sii dheeraysanayaa rikoodhkaas oo uu gaadhsiinayo heer ay adag tahay in laga daba yimaaddo.
Ciyaar saaxiibtinimo oo xalay dhex martay Qatar iyo Portugal, kana dhacday garoonka Estadio Algarve ayaa uu Ronaldo si fudud shabaqa usoo taabtay daqiiqaddii 37aad, waxaanu goolkaasi noqday midkii 112aad ee kulamada caalamiga ah uu ka dhaliyo.
Labada gool ee kale waxa qaybtii labaad raaciyey Jose Fonte iyo Andre Silva.
Rikoodhka cajiibka ah ee uu u dabbaal-degay ayaa waxa uu ahaa in kulankiisii 181aad uu u saftay xulka qaranka Portugal, waxaanu hadda laga bilaabo yahay ciyaartoyga ugu safashada badan taariikhda kulamada caalamiga ah.
Halyeyga Spain ee Sergio Ramos ayaa hore u haystay rikoodhkan isagoo saftay 180 ciyaarood, laakiin Luis Enrique ayaa si lama filaan ah uga reebay tartankii Euro 2020 maadaama uu waqtigaas kasoo kabtay dhaawac, haddana lama hubo inuu kusoo celin doono.
Previous articleMaleeshiyo weerartay hotel ay ka socoatay doorashada golaha deegaanka Baraawe
Next articleInter Milan oo qorsheyneysa bisha Janaayo inay u dhaqaaqdo Luka Jovic, iyo Alexandre Lacazette ‘